» “रातारात बोली फेरियो” ! रंगशालाको लागि ज्यान दिन तयार छु !,तारा बराल लाई अब म कार्बाही गर्छु ,भन्दै यी व्यक्तिको कडा आक्रोश ! (भिडियो सहित) “रातारात बोली फेरियो” ! रंगशालाको लागि ज्यान दिन तयार छु !,तारा बराल लाई अब म कार्बाही गर्छु ,भन्दै यी व्यक्तिको कडा आक्रोश ! (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
“रातारात बोली फेरियो” ! रंगशालाको लागि ज्यान दिन तयार छु !,तारा बराल लाई अब म कार्बाही गर्छु ,भन्दै यी व्यक्तिको कडा आक्रोश ! (भिडियो सहित)
हेर्नुहोस उत्त भिडियो…